Mikel Arteta oo hal arin ku dhiiragaliyay ciyaartoydiisa ka hor kulanka habeen dambe ee Man City – Gool FM
Mikel Arteta oo hal arin ku dhiiragaliyay ciyaartoydiisa ka hor kulanka habeen dambe ee Man City
(London) 21 Dis 2020. Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa ku booriyay ciyaartoydiisa inay u istaagaan oo ay ka faa’iideystaan ​​kulanka ay habeen dambe kula ciyaari doonaan naadiga Manchester City koobka Carabao Cup.
Arsenal ayaa laga badiyay shan jeer toddobadii kulan ee ugu dambeysay, ee horyaalka Premier League, waxaana ay haatan ku jirtaa kaalinta 15-aad ee dhanka miiska kala sarreynta iyagoo leh 14 dhibcood, waana bilowgii ugu xumaa ee xilli ciyaareed tan iyo (1974-1975).
Laakiin inay guuleystaan kulanka habeen dambe ee koobka Carabao Cup, ayaa yareyn kara xoogaa cadaadis ah oo saarnaa tababaraha reer Spain ee Mikel Arteta, kaasoo la wareegay hoggaanka kooxda Gunners bishii December ee la soo dhaafay.
Mikel Arteta ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka Manchester City ee koobka Carabao Cup ayaa wuxuu yiri:
“Tani waa waxa aan dooneyno inaan kaga faa’ideysano ciyaarta si aan u gaarno, waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano tartankan.”
“Intaas ka hor, waxaan wajahnay labo tartamayaal waa weyn oo kala ah Leicester City iyo Liverpool, waxaana ku guuleysanay inaan ka adkaano labaduba.”
“Hadda waxaan usii dhowaanaynaa hal talaabo kale oo garoonka Wembley ah, anaga ahaan kulankaan waa mid fiican, sababtoo ah waa nooca aan rajeyneyno inta lagu jiro xilli ciyaareedka.”
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa jiray baaqyo ah in shaqada laga ceyriyo Mikel Arteta, laakiin tababaraha ayaa sheegay inuu taageero ka haysto guddiga maamulka kooxda.
Mikel Arteta oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri:
“Kooxda waxaan ka dareemayaa taageero iyo dhiirigelin, iyo kalsooni buuxda oo ku aadan awooddeena inaan si wada jir ah uga guuleysanno xaaladdan.”
“Dhab ahaantii kooxdan weyn waxay u qalantaa waxa ugu wanaagsan, anigana dhankeyga waxaan qaadayaa mas’uuliyadda natiijooyinka, waana qirayaa taas.”
Si kastaba ha noqotee weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa seegi doona kulanka habeen dambe ee Man City, sababa la xiriira dhaawac kubka ah ee soo gaaray, laakiin Arteta ayaa xaqiijiyay inuu dhawaan kusoo laaban doono kooxda.
“Waqti xun ayaan soo qaatay... waxaana maraynaa xilli adag.” – Lionel Messi
Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona uga qeyb galaya kulanka Valladolid… (Yaa ka maqan Yaase ku soo baxay?)